အောင်သက်ဝိုင်း| June 25, 2012 | Hits:6,887
| | အာမခံရသွားသည့် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်အား သတင်းထောက်များက မေးမြန်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
Soe Nyunt June 25, 2012 - 10:49 pm Media must be freedom at the democracy country . No need the restriction.
Reply david June 26, 2012 - 8:45 am အမျီုးမျီုလူံ.ဆော်ရေးသားပြီးတကယ်အရေးယူမယ်လုပ်တော်နှားစေးပြနေတယ်၊သွေးတိုးဆီး ချိုနဲ.အကြောင်းပြနေတယ်သူရဲ့အရေးအသားဓါတ်ပုံတွေကြောင့်လူဘယ်လောက်သေသွားသ လဲဆိုတာသူသိဖို.ကောင်းတယ်၊ခေတ်အဆက်ဆက်ကလုပ်စားခဲ့တယ်ဆိုတော်အခုသူအပြစ် နဲ.သူခံရတာဝမ်းနည်းစရာမရှိပါဘူး။
Reply dadida June 26, 2012 - 5:36 pm He looks likeayello journalist.He seems2b had severe disease which brings him2cemetry n appears shaking .Go Myat Khine Go Go GO!!!!!!!!
Reply nagarlay June 27, 2012 - 11:33 pm ဦးမြတ်ခိုင် … (လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်) ဆိုတော့….
Reply nagarlay June 27, 2012 - 11:35 pm ဦးကျော်ဟိန်းအကြောင်း လျှောက်ဖွတယ်ဆိုတာက … သူ ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးမှ ထွက်တဲ့ စာအုပ်ကို ဝေဖန်တာ မဆိုင်တာတွေပါလာတာကို ပြောတာပါ…. သူများကို သူပုတ်လေလွင့် ပြောချင်တဲ့သူပဲ